AVS Video Converter v8.4.2.541 + Crack - .::just for share::.
Home » AVS » Video Converter » AVS Video Converter v8.4.2.541 + Crack
AVS Video Converter v8.4.2.541 + Crack
ဟိုတစ်နေ့က toptenreviews.com ကိုဝင်ကြည့်တော့ အဲ့မှာ Video Converter Software List ကိုကြည့်တော့ AVS Video Converter ကိုသွားတွေ့တယ်။ ဒီကောင်က ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေတာ။ NO.1 ပေါ့။
ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Total Video Converter က နံပါတ်-၉ မှာ။ ဒါနဲ့ NO.1 မှာရှိနေတဲ့ AVS Video Converter ကိုသုံးချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ ဒေါင်းပြီးသုံးကြည့်လိုက်တယ်။ ဘာကောင်းလဲ ၊ ဘာကြောင့် နံပါတ်တစ် ဖြစ်နေရလဲဆိုတာ ၊ သုံးကြည့်ပြီးမှ သိလိုက်၇တယ်။ ကျွန်တော်သုံးဖူးသမျှ Video Converter တွေထဲမှာ ဒီကောင်က အကောင်းဆုံးပဲ။ Video convert လုပ်ရင်၇လာတဲ့ quality က တခြား Converter တွေထက် ပိုကောင်းတယ်။ နောက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ Video camera
မှ၇လာတဲ့ AVI ကို dvd သို့ပြောင်းသောအခါ ၊ တစ်ခြား convert တွေမှာ scence တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပုံရိပ်အပြောင်းမှာ မှုန်းဝါးဝါးလေးတွေ ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီ AVS Video Converter နဲ့စမ်းတာ လုံးဝကို မှုန်းဝါးဝါးမဖြစ်ဘူးဗျာ။ နောက် Frame rate အကူးအပြောင်းကလဲ လုံးဝကိုသပ်ရပ်တယ်။ နောက်ထူးခြားတာလေးတွေရှိသေးတယ်။ ပြောနေရင် လေရှည်နေအုံးမယ်။အသုံးလိုမယ့်သူငယ်ချင်းများရယူနိုင်ပါတယ်။...
Convert video to FLV, F4V, etc. with AVS Video Converter. Create HTML pages with embedded FLV/F4V videos. Upload videos on your
>>>Download AVS Video Converter v8.4.2.541 + Crack<<<
Labels: AVS, Video Converter